Portable Hand asa Station
Fkpakọba akpa Container Video
Adreesị Onye isi oche
Kedu ụdị njirimara nke ụlọ prefabricated K?
N’ezie, a na-akpọkwa ụlọ a na-akpọ ụdị K nke dị larịị. Ekere ya ụzọ atọ: ụlọ ejikere mbụ, ụlọ eji arụ ọrụ na ụlọ a na-ere ahịa ugbu a na ahịa dị ugbu a. N'oge a, dị ka mkpa ndị ahịa si dị, modulu ọkọlọtọ nwere ike ...
Gịnị bụ isi uru nke ewepụghị mkpọ akpa ụlọ?
Agbanyeghị, ụlọ mkpọmkpọ ụlọ dị larịị ma sie ike, nwee njigide ikuku dị mma, mgbakọ na mgbakọ dị mma, arụmọrụ dị mma, na nguzogide dị egwu, nke ọtụtụ ndị ọrụ hụrụ n'anya nke ukwuu. Ọzọkwa, flat flat flat flat flat flat flat flat - flat, ...
Kedu ka ndị nrụpụta ụlọ si rụọ ọrụ sikwuo ike n'ụlọ ahụ akwadoro?
Houselọ a rụpụtara ụdị K nke a rụrụ site na ụdị ụlọ K bụ nke kachasị n'ihi nrịgo elu, ya mere, ikuku ikuku na-esiwanye ike, ọ nwere ike iguzogide ifufe karịa ọkwa 8. Klọ prefabricated nke K bụkwa ụlọ akụ na ụba. na ìhè ígwè Ọdịdị dị ka ọkpọ ...
Kedu ihe bụ uru ụlọ ụlọ dị iche na ụlọ ọdịnala?
Kedu uru ndị ọ bara? Mwube nke ụlọ eji arụ ọrụ na-ezo aka n'ụlọ gbakọtara na saịtị nwere akụrụngwa akụrụngwa. Uru nke ụdị ụlọ a bụ ọsọ ọsọ ọsọ, enweghị oke ọnọdụ ihu igwe, ịchekwa ọrụ ma melite ogo ụlọ. W ...
Olee otú iji dozie ọnọdụ ndị a nke residential containers?
Ugbu a, a na-eji igbe obibi ebe niile maka ndụ ndị mmadụ na-adịru nwa oge. Kedu ihe kpatara ịhọrọ akpa iji biri? Nke a bụkwa n'ihi na ọ dị mfe ịkwaga. Maka ubi ndị dị ka injinia na ihe owuwu, ruo na ngwụcha nke oge owuwu ahụ, ụlọ ndị ọrụ ga-abụkwa nke a ga - echekwa ...
Gịnị mere eji etinye arịa iji wuo ụlọ?
1. Okpokoro okpokoro dị mfe iji kpokọta Onye ọ bụla maara na ụlọ akpa ahụ bụ ụdị usoro. Kehoraizin na vetikal dị nnọọ mma maka facade chọrọ nke ụlọ ahụ. Mgbe emechara ihe osise ahụ, a ga-emecha ihe ngosi ụlọ ahụ ma ọ bụrụhaala na c ...
Gini ka eji eji ulo eji ebu ahihia?
N’afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bịara na-ewu ewu ịgbanwe ụlọ e ji etinye ihe n’ụlọ ka ọ bụrụ ebe obibi, họtel, ebe a na-ere akwụkwọ, ebe obibi, na ebe ọrụ. A na-ewu ewu ugbu a ebe obibi n'ihi akwụkwọ akụkọ ha na ejiji ejiji, ọnụ ahịa dị ọnụ ala, yana nchekwa gburugburu ebe obibi na ...
Gini bu olile anya nke ebe obibi?
A na-agbazinye ihe eji ebi ebe obibi maka ebe ndị ọrụ ga-ebi, ụfọdụ azụtara ma kwụnye onwe ha ka ha jiri rụọ ọrụ. Nnukwu uru nke Living containers bụ mgbanwe na mma. Maka ndị enyi na-arụ ọrụ na saịtị owuwu n'ọzara, ọ bụghị o ...
Gosh! Ihe nwere ike ime ka obi dị mmadụ ụtọ ma ọ bụrụ na igbe nwere ya
Containerlọ klas efere maka ndị bi na mpaghara ọdachi jupụtara na olileanya ụmụaka Mgbe ọtụtụ ụbọchị gachara ala ọmajiji Ya'an na Sichuan, ụmụaka nọ n'ógbè ọdachi ahụ nwere ike mechaa gaa ụlọ akwụkwọ. A na-ewu ụlọ klas ahụ site na igbe obibi. Kwa ụbọchị dị ogologo maka ndị mmadụ ...
Kedu ihe bụ ụkpụrụ ojiji nke ụlọ mkpanaka akpa?
Na Guangdong, ndị na-emepụta ụlọ na-ebugharị ngwa ngwa amalitela ọsọ ọsọ ọsọ. Enwere ụlọ nkwari akụ e mere ma wuo site na mobile mobile ụlọ. Shapedị ahụ yiri nke ahụ nke ukwuu na ime ahụ nwere ekpomeekpo pụrụ iche. Ala nke ụlọ nkwari akụ ahụ kpuchie ya na ala osisi mejupụtara. Nke ...
Ebe nkwari akụ n’akụkụ Oké Osimiri / Holzer Kobler Architekturen + Kinzo
Mpempe akwụkwọ ndị a dị mita iri abụọ na abụọ na iri abụọ na ise, bubu ihe eji ebu ngwongwo gafee oké osimiri, agbakọrọ ugbu a n’ime ụlọ nkwari akụ. Ndị nwere mmasị ịgagharị ga-arọ nrọ n'oké osimiri ebe a. Hotellọ nkwari akụ ahụ dị na Warnemünde. N'ihi ojiji nke recycled ibu ibu na ya pụrụ iche ọdụ ụgbọ mmiri ebe, h ...
Ọ bụrụ na ịchọrọ ụlọ pụrụ iche, mgbanwe akpa bụ ezigbo nhọrọ
Akpa bụ akụrụngwa akụrụngwa nke enwere ike iburu na ngwugwu ma ọ bụ nke a na-akwakọba maka njem, nke dị mfe maka itinye, ibudata na njem na ngwa igwe. Nke a bụ otu n’ime ọrụ ebube kasịnụ ụmụ mmadụ kere eke. Agbanyeghị, na mgbakwunye na njem, ...
Chọrọ Addgbakwunye Sky Iji Na-achọ Gị?